Jiri proxy na Openbox, Fluxbox, LXDE, Xfce na ihe yiri ya | Site na Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, Netwọk / Sava, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ewetara usoro m kọwara n'okpuru ebe a site na ịtụgharị otu edemede na Spanish na Arch Wiki banyere iji a Onye nnọchiteanya. Usoro a gha aghaghi idi oke maka nkesa ozo.
Desktop Gburugburu dị ka Xfce o Lxde enweghị ngwa ọ bụla na-enye ha ohere ijikwa ojiji nke Global Proxy na sistemụ, n'ụzọ anyị nwere ike isi mee ya Gnome o KDE.
Mgbanwe gburugburu ebe obibi
Programsfọdụ mmemme (dị ka wget) na-eji mgbanwe gburugburu ebe obibi nke ụdị "protocol_proxy" iji chọpụta nnọchite nke otu protocol (dịka ọmụmaatụ, HTTP, FTP, ...).
Nke a bụ ihe atụ nke otu esi ahazi mgbanwe ndị a:
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ime ka ihe mgbanwe dị na gburugburu ebe obibi ndị ahụ edepụtara maka ndị ọrụ niile, anyị nwere ike ịgbakwunye edemede, dịka ọmụmaatụ "Proxy.sh"n'ime /etc/profile.d/. Ederede ahụ ga-enwerịrị ikikere.
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịgbanwee mgbanwe nke mgbanwe site na ịgbakwunye ọrụ na faịlụ gị .bashrc dị ka ndị a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Jiri proxy na Openbox, Fluxbox, LXDE, Xfce na ihe yiri ya
eziokwu agaghi eji proxy eme ihe o bu?
Ọfọn ... A zighachi akwụkwọ nnọchianya nwere ọtụtụ ojiji. A proxy na-eje ozi iji gbochie njikọ netwọk nke onye ahịa na-eme na sava na-aga. Kedu ihe dị elu, dịka m na-ekwu, ọ nwere ọtụtụ ojiji. Ka anyị hụ otu m siri kọwaa gị n'ụzọ dị mfe:
a) Ka anyị kwuo na PC gị ụlọ ọrụ ị na-agagharị site na a Proxy. Ọ bụrụ na o nwere ọrụ oghere ma ị banye na, dịka ọmụmaatụ, linux.net, ozi niile ị nwetara ga-echekwa na nchekwa ya. Ya mere, mgbe ị na-abanye ọzọ na oge ọzọ, na ohere ga-a bit ngwa ngwa n'ihi na ị ga-enwe ụfọdụ ihe na kwuru dị n'ime oghere.
b) Ka anyi kwuo na ijiri na PC na ulo oru gi ma ichoro inweta desdelinux.net. Mgbe ị gara ịchọgharị na PC ahụ, ọ na-arịọ arịrịọ maka Proxy Server nke ụlọ ọrụ gị yana dịka mmachi ndị ị nwere, sava a na-eziga arịrịọ gị na orntanetị ma ọ bụ jụ ya.
Ndị a bụ ikpe abụọ. Ihe nnọchiteanya proxy nwere ike ịbụ ihe ma ọ bụ dị ezigbo mma, ma ọ bụ dị nnọọ njọ (dị ka ọ dị m).
Maka ozi ọzọ hụ njikọ a
Ọ rụkwara ọrụ iji gbochie nzacha, ka anyị ghara ichefu
Nke ahụ bụ ụdị ọzọ zighachi akwụkwọ nnọchiteanya 🙂
Achọrọ m ịjụ onye edemede ahụ ma ọ nwere, ị nwere mgbe ọ kekọrịta ịntanetị site na PAN (bluetooth)? Emere m ya na mmeri 7 na XP, nke m nwere njikọ ahụ, m welitere zighachi akwụkwọ nnọchiteanya (perProxy mere na java) na igwe ọzọ site na PAN, ejiri m IP na ọdụ ụgbọ mmiri hazie Firefox. Mgbe m gbanwere Linux, amakwaghị m otu esi eme PAN n’etiti igwe.
Ndewo ehihie ọma,
Abụ m onye ọrụ Lubuntu nwere obi ụtọ ma agbabawo m na nsogbu m na-eji njikọ kọleji m (yana zighachi akwụkwọ nnọchiteanya) kwa ụbọchị yana njikọ ụlọ m kwa (na-enweghị proxy). Yabụ, ọ bụrụ na m hazie akwụkwọ nnọchiteanya sistemụ niile, m ga-etinye ya ma gbanyụọ ya dabere na m nọ mahadum ma ọ bụ na anọghị m.
Enwere ụzọ iji rụọ ọrụ a nke na ọ dabere na netwọk Wi-Fi ị jikọọ, enwere ike ịgbalite ya ma ọ bụ?
Ndewo ezigbo ehihie 🙂
Kedu ka o si bụrụ na ị na-edozi proxy maka sistemụ gị? Site n'iwu dị a ?aa?
Enwere m ike ịhazi edemede nke na - achọpụta WiFi ị jikọtara, yana dabere na nke ọ bụ ... jiri zighachi akwụkwọ nnọchiteanya ma ọ bụ ọzọ.
Ekele na nnabata.
Ndewo onye ọ bụla! Anọ m na-arụ ọrụ na LXDE nwa oge na, maka okwu yiri nke Ariel, a manyere m ịhazi zighachi akwụkwọ nnọchiteanya iji jikọọ na Internetntanetị.
Anọ m na-aga akwụkwọ na AskUbuntu ma hụ onye jụrụ ihe yiri ya na azịza ya nyere aka! M na-ahapụ njikọ ahụ ọ bụrụ na mmadụ nwere mmasị ile ya anya: http://askubuntu.com/q/175172/260592
N'ikpeazụ, m ga-achọ ịma ma ọ bụrụ na KZKG ^ Gaara haziri edemede nke na-achọpụta WiFi ma gbanwee proxy dabere na netwọkụ ... Ọ ga-aba uru ma ọ bụrụ na m kpebiri ịkọrọ ya.
Ana m ekele gị nke ukwuu na ekele!
Ndewo, ana m eji slackware 14.1 eme ihe m mere akụkụ nke edemede ahụ nke ọma, ihe m na-ahụghị na sistemụ m bụ faịlụ .bashrc
Ihe ederede a emeela ochie, mana m ka ga-ede gị n’ime ya n’ihi na ọ dịka ihe kacha nso nsogbu m:
Kedu ihe m ga - eme mgbe onye ọrụ m nwere ụdị USER @ COMPANY? Ọ bụrụ na ị youa ntị; Arrobas abụọ ga-anọgide na otu akara!
Dochie Gedit na ntụgharị uche na Xfce